Samsung abụrụla akara nke abụọ kacha ere ahịa na wearables | Gam akporosis
Samsung gosipụtara ọhụụ ọhụụ ọhụụ n'izu a, ihe ngosi nke ihe nlere 2. Dị Korea na-enwe nsonaazụ dị mma n'ọhịa nke ihe eji ejiji, ekele maka nche ndị a ma ọ bụ ọla aka ha nwere ọgụgụ isi. Ya mere ha jiri igwe ohuru rapuru anyi. Emeela ka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na mpaghara ahịa nke abụọ a pụta.
Dị ka ga-eme na nkeji iri na ise nke afọ a, Samsung na-aga n'ihu na-eto eto na ezigbo usoro ahịa a. N'ezie, ha abụrụlarị nke abụọ kachasị ere ahịa n'azụ Apple. Nsonaazụ dị mma maka akara Korea n'ụzọ dị otú a, nke na-aga n'ihu na-enwe ọganihu dị mma.
Na nkeji nke abụọ nke afọ a, Samsung rerewo nde abụọ ekike (smart smart na ọla aka). Agbanyeghị na ha dị anya na ahịa Apple, nke rere nde 5,7 n'otu oge ahụ, o nyeere ha aka inweta ọnọdụ nke abụọ na ahịa a.
Ọzọkwa, na-anọchi anya ezigbo uto maka onye nrụpụta Korea. Ha abụọla ahịa okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere otu oge n'afọ gara aga, ha na-ejikwa ike ịzụlite ahịa ha. Ya mere, ihe na-aga nke ọma na ụlọ ọrụ na ngalaba nke wearables, ekele ya ọhụrụ nso.
N'ezie, Samsung apụla nwee òkè ahịa nke 11% iji were 16%. Ezigbo ihe akaebe na ọnọdụ gị n'ahịa a ka mma. Ngwaahịa dị ka ọrụ ha nke Galaxy Watch nọ na-ata ụta maka ezigbo ahịa ndị a.
Apple na Samsung na-ekere òkè n'ahịa a n'ụzọ dị otú a. Ha bụ otu ụdị ndị ahụ na-achịkwa ahịa maka mbadamba, ndị ahịa ha gosipụtara n'izu a. Ya mere, ndị Refeyim abụọ ahụ jisiri ike karịa ndị asọmpi ha na nke a. You nwere nke ọ bụla n’ime elele nke akara Korea?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung nwetara ọnụnọ n'ahịa a na-eyighị eyi
Otu esi eme ka usoro ọgụgụ di na Google Chrome